डिएपी ५ केजी प्रति रोपनी र ३.५ केजी प्रति कट्ठाको हिसावले जग्गा तयारी हाल्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तै कम्पोष्ट मल प्रति रोपनी १५०० केजी र प्रति कट्ठा १००० केजी जमीन तयारी गर्दा प्रयोग गर्नु पर्दछ । पोटास प्रति रोपनी ४ केजी र प्रति कट्ठा २.६ केजी जमीन तयार गर्दा नै प्रयोग गर्नु पर्दछ ।
लाइनदेखि लाइनवीचको दुरी १ मी र बोटदेखि बोटको दुरी २५ देखि ३० से.मी. राख्ने । ड्याङ बीचको कुलोको चौडाई ३० से.मी. राख्ने । बीउलाई जमीनको सतहबाट ३ देखि ५ से.मीको गहिराईमा रोप्ने ।
रोगमा मुख्यत डाउनी मिल्ड्यु र सिन्दुरे रोग लाग्दछ । रोगको नियन्त्रण गर्न सिफारिस गरिएको रोग निरोधक जातहरु लगाउने ।